Imiphi amakhambi ukwehlisa ushukela wegazi > Ukwelashwa nokuvimbela
Izindlela zokupheka ezinhle kakhulu, Izinongo nezinongo
Isifo sikashukela i-mellitus, ngeshwa, namuhla isifo esidlangile emhlabeni wonke esithinta abantu banoma yibuphi ubudala nabobulili. Le pathology eyingozi ye-endocrine ingadala izingqinamba ezinzima ezivela ezinhlakeni zenhliziyo, ezinzwa nakwezinye izinhlelo.
Ukuvimbela ukuguquka kwesifo kube uhlobo olubi ngokwedlulele, umuntu kufanele alandele ngqo ukudla, ashintshe indlela yokuphila. Ngaphezu kwemithi enikezwa umuthi osemthethweni, ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kwalesi sifo kusebenzisa imikhiqizo, amakhambi anciphisa ushukela wegazi,
Umuthi osemthethweni uqinisekisa ukuthi ezinye izitshalo empeleni zehlisa ushukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, zinomphumela wokuphulukisa futhi ojwayelekile emzimbeni wesiguli.
Amakhambi asetshenziswa empini yokulwa nesifo sikashukela
I-Rhodiola rosea, i-ginseng, i-eleutherococcus, umvini we-Chinese magnolia unezakhiwo ze-hypoglycemic. Amakhambi aphatha isifo sikashukela ahlukaniswe phakathi kwe-hypoglycemic, kufaka phakathi izinto ezifana ne-insulin nalezo ezinomphumela wokuqinisa umzimba: ukukhuphula ukungasebenzi komzimba, ukuhlanza umzimba, nokwenza kusebenze umsebenzi wezitho zangaphakathi. Ezangaphambili zivame ukusetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo II, zichazwa njengezengezo ekudleni nezidakamizwa ezinciphisa ushukela. Abaphumeleli ngohlobo lwesifo sikashukela sohlobo I.
Uhlu lwamakhambi olwehlisa ushukela wegazi lungamiswa ngale ndlela elandelayo:
Amahlamvu kanye namaqabunga e-birch,
Lokhu, ngokweqiniso, kude nohlu oluphelele lwamakhambi. Sizotshela ngabo nangezinye izitshalo zokwelapha nezakhiwo zabo kulolu lwazi.
Ukudla Amakhambi E-glucose Herbs
Kuyaziwa ukuthi ngemuva kokungena kokudla emzimbeni, kuphuma ushukela. Kungakho ochwepheshe batusa ukuthatha isivivinyo sikashukela esiswini esingenalutho. Umzimba womuntu ophile kahle uphendula ekudleni kwemikhiqizo equkethe ama-carbohydrate ngokwandisa i-glycemia isikhathi esithile ngemuva kokudla.
Ngokuphula umzimba we-carbohydrate, ukulungiswa kwe-hyperglycemia usebenzisa izitshalo zokwelapha kwenziwa ngezigaba eziningana:
ngemuva kokuthola ukudla,
ngesikhathi sokufakwa ushukela egazini.
Ukunciphisa inani lokudla kwe-carbohydrate, kusetshenziswa amakhambi enza umuzwa wendlala. Kepha kufanele zisetshenziswe ngokucophelela, ngoba umphumela we-hypoglycemia kungenzeka, okuyisimo esiyingozi koshukela. Izitshalo ezelula izindonga zesisu zisiza ukunciphisa inani loshukela oza nokudla kwe-carbohydrate, okunikeza ukukhohlakala kokusichichima. Isibonelo, i-flaxseed, inothile ngamavithamini kanye nama-acid amaningi azuzisayo. Kusetshenziswe njengesilinganiso.
Thela amanzi abilayo ngesipuni sezinto zokusetshenziswa. Ngemuva kwamahora amathathu, ukumnika ukulungele ukusetshenziswa. Imbewu kaPlantain inezici ezifanayo.
Ngesikhathi sokufakwa kweglucose egazini, izitshalo ezinomphumela wokulimaza kufanele zisetshenziswe. Isibonelo, i-Jerusalem artichoke. Inenombolo enkulu yama-polysaccharides anciphisa ukubonakaliswa kwe-hyperglycemia ngemuva kokudla.
Izitshalo ezilawula ushukela wegazi
Ukwehlisa ushukela wegazi, kubalulekile ukuletha ama-molecule eglucose emithanjeni futhi uqinisekise ukungena kwawo kumaseli. Le yindlela yokusebenza kwe-standardoglycemia esebenza emzimbeni onempilo. Kulesi sigaba, izitshalo ezivuselela ama-pancreas ziyasebenziseka. Lokhu kuyadingeka ukukhiqiza inani elidingekayo le-insulin.
IGinseng isho amakhambi anciphisa ushukela wegazi ngesikhathi sokujikeleza emzimbeni. Isitshalo senza kusebenze kabusha amaseli we-pancreatic. I-mistletoe eyakhiwe kahle, isinamoni, ipiyuni. Abameli abalandelayo bezitshalo zokwelapha ezisehlisa ushukela wegazi yilazo aqukethe i-zinc ekwakhiweni kwabo:
Lawa makhambi abalulekile ngoba avuselela ukukhiqizwa okusebenzayo kwe-insulin ngamanyikwe uma umsebenzi wobunobhala ungalahleki ngokuphelele. Lawa makhambi asetshenziswa njenge-infusions.
Imiphi amakhambi ukwehlisa ushukela wegazi?
Akumelwe sikhohlwe ukuthi cishe zonke izitshalo zokwelapha ezihlose ukwehlisa ushukela azikwazi ukuba isisekelo sokwelashwa, ngoba azikwazi ukuba nomphumela onamandla wokwelapha ezigabeni ezinzima nezishubile ze-pathology. Amakhambi ukuthi ushukela wegazi ophansi kufanele abe ngenye yezixhumanisi ezakhiweni zokwelapha futhi, ngemuva kokubonisana nochwepheshe.
Iningi labanesifo sikashukela bazi kahle izici ezinzuzisayo zalesi herb, esheshe sehlise ushukela wegazi. Esikhathini sikashukela, impande ecebile ku-inulin ijwayele ukusetshenziswa. Ukulungiselela okususelwa kulo akugcini nje ngokunciphisa izinga le-glycemia, kodwa futhi kuvimbele ukukhula kwezifo ezithathelwanayo nezivuvukelayo.
Izimpande ezingezansi ze-chicory (30 g) uthele u-500 ml wamanzi abilayo, uthele ukushisa okuphansi bese ubilisa imizuzu eyi-10. Ngemuva kwalokho umhluzi kumele uhlungiwe bese uphola. Isiphuzo esimnandi kakhulu kufanele siphuzwe engxenyeni yesithathu yengilazi kabili ngosuku.
Powder kusuka ezimpandeni zalesi sitshalo (wezipuni ezi-3) uthele izingilazi ezimbili zamanzi abilayo. Umuthi ufakwa amahora amane. Thatha ukumnika isigamu senkomishi kane ngosuku.
Lesi sitshalo sisetshenziswa ngendlela yokumilisela noma i-decoction. Ukuze ulungiselele ukumnika, uthele ama-500 g wezinto ezingavuthiwe ngamanzi abilayo futhi akuyeke ukwenze amahora amabili. Umuthi uyahlungwa futhi uthathwe kathathu ngosuku imizuzu engama-40 isigamu senkomishi ngaphambi kokudla. Ama-oats aqukethe amavithamini amaningi namaminerali, ama-polysaccharides anciphisa ukwanda kwe-glycemia.
Abantu abaningi abanesifo sikashukela “abanolwazi” bayazi ukuthi yimaphi amakhambi anciphisa ushukela wegazi ngempumelelo. I-Felt burdock, esetshenziswe ngendlela ye-decoction, ikhombisa imiphumela emihle kakhulu.
Isipuni seqabunga elomile elichotshoziwe, uthele ¼ ilitha lamanzi abilayo. Umuthi uphuzwa kathathu ngosuku, 70 ml ngaphambi kokudla.
Isitshalo seLegume, utshani obungapheli. Ukuvunwa kwembewu nezingxenye ezinotshani zesitshalo kwenziwa ngesikhathi sezimbali. Imbewu iqukethe i-galegin - into enomphumela ofana ne-insulin.
Kufakwa isipuni sesitshalo engilazini yamanzi abilayo. Thatha imithamo eminingana usuku lonke. Leli thuluzi lisebenza ngempumelelo kuphela ngenkambo emnene yesifo. Ukwelashwa kufanele kuqhubeke inyanga.
Uma ungazi ukuthi yiluphi utshani obunokwehlisa ushukela wegazi, naka utshani bekamela, igama lesibili yi-fenugreek, elingelomndeni we-legume. Utshani bekamela unezakhi zokwelapha ezilandelayo:
isekela umsebenzi wenhliziyo nemithambo yegazi,
ithuthukisa umzimba ngamavithamini nangamaminerali,
ivuselela umgudu wokugaya ukudla.
Lesi sitshalo sinomphumela onamandla we-hypoglycemic, sisebenza kabusha kwamaseli we-pancreatic, sivuselela ukukhiqizwa kwe-insulin. I-Fenugreek isheshisa ukuqedwa kobuthi futhi kwehlise amazinga kashukela.
Imali ye Herb
Ukulungiswa kwamakhambi ngesikhathi sokwelashwa kungathengwa ekhemisi noma kulungiswe ngokwakho, kugcinwe imithetho yokuthengwa. Kubalulekile ukwazi ukuthi akuwona wonke amakhambi anciphisa ushukela wegazi kushukela ongahlanganiswa nawo. Uma ungenaso isipiliyoni sokuqoqa nokuvuna amakhambi okwelapha, kungcono ukunikeza ukukhetha ekwakhekeni kosokhemisi. Ukulungiswa kwamakhambi kunomthelela oyinkimbinkimbi emzimbeni. Isikhathi sokwelashwa ngabo sithatha izinyanga ezimbili. Ngemuva kwalokho kufanele uthathe ikhefu amasonto amabili. Enkambweni elandelayo yokwelashwa, kuthathwa ukwakheka okuhlukile.
Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi uma welapha isifo sikashukela, kusebenza kakhulu ukusebenzisa hhayi isitshalo esisodwa, kodwa amaqoqo ezinhlaka eziningi. Yimaphi amakhambi okwehlisa ushukela wegazi nokuthi ahlanganiswa kanjani emaqoqweni ahlukene, sizochaza ngokuqhubekayo.
Lokhu ngenye yamaqoqo aziwa kakhulu kashukela, okuthi, ngokuya ngamanani nemithamo, kusebenza kakhulu:
ama-birch efihlekile - izingxenye ezi-2,
gorchanka utshani - izingxenye ezi-4,
okhalweni lwe-rose - izingxenye ezi-3,
i-burdock izimpande - izingxenye ezi-5,
utshani bezinkulungwane - izingxenye ezi-5,
i-net nettle - izingxenye ezi-3,
licorice izimpande - 2 izingxenye.
Wonke amakhambi ahlanganiswe kahle, kukhiqizwa izipuni ezi-2 (wezipuni) zenhlanganisela bese kuthululelwa ngamanzi abilayo (0.5 l). Amakhambi athela amahora amathathu. Ngaphambi kokudla (kepha okungenani izikhathi ezi-3 ngosuku) thatha ukumnika okungu-150 ml.
Amaqabunga ezindebe zebhere, ama-blueberries, izimpande ze-valerian nezimpande ze-dandelion zichotshoziwe futhi zihlanganiswe ngokulingana okulinganayo. Izipuni ezimbili (wezipuni) zenhlanganisela yamakhambi zithululelwa ngamanzi abilayo (0.5 l), afakwa ihora, ahlungiwe futhi athathe uhhafu wengilazi ngaphambi kokudla.
Iqoqo elilandelayo lamakhambi linempahla ye-hypoglycemic kanye namandla okwenza ngcono isimo sepheshana lesisu. Hlanganisa amakhambi alandelayo ngezilinganiso ezilinganayo:
Amakhambi achotshozwa ezweni eliyimpuphu futhi adle le ngxube ka-½ tsp. isigamu sehora ngaphambi kokudla amahlandla amane ngosuku. Kuyalulekwa ukuphuza le ngxube ngejusi lewolintshi noma itiye eliluhlaza.
Hlanganisa amaqabunga e-walnut, aluhlaza kanye nesihlahla kamalibhele ngokulingana okulinganayo. Faka engxubeni inani elilinganayo lotshani be-wort yase-St. John, i-peppermint, i-galega, i-birdwooder ephakeme, ama-pod pod Hlanganisa kahle zonke izithako, bese isipuni sengxube, sithululelwa no-250 ml wamanzi abilayo, cwilisa kubhavu wamanzi imizuzu emi-5.
Lapho ukwakheka sekupholile, kuyiphuze bese kuphuza umhluzi phakathi kwemithamo emithathu. Ukwelashwa kuthatha amasonto amathathu.
Imithetho yokwakha amakhambi nezimali zokwelashwa
Kubalulekile ukuthi ungazi nje kuphela ukuthi yimiphi amakhambi okwehlisa ushukela wegazi, kodwa futhi nokulandela imithetho yokulungiswa kwamakhompiyutha okwelapha. Iningi labasebenza ngama-phytotherapists nabelaphi bendabuko batusa ukulungiselela imali nokufakwa ngaphakathi kubhavu wamanzi, kodwa ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi izinto ezinenzuzo eziqukethwe ngamakhambi zidonswa ngaphandle kwezimo ezinjalo.
Kunconywa ukulungiselela ukumiliselwa kusihlwa, ukuze ekuseni ungathatha uhhafu noma ingxenye yesithathu yomthamo onconyiwe. Ngokukhiqiza, ungasebenzisa ingilazi noma ikhekhe le-ceramic nge-piston. Phansi kwawo kwakubeka amakhambi owomile ochotshoziwe, athelwa ngamanzi abilayo. Ekuseni, ikhambi ngeke ligcine nje kuphela, kepha lizongena futhi lihlanzekile.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi izakhiwo ezizuzayo zalezi zidakamizwa zigcinwa isikhashana. Ngemuva kwalokho kuqala ukusakazwa kwamagciwane, anomthelela ekuthuthukiseni ukusabela kwe-enzymatic. Ukufakwa noma umhluzi, ongagcinwanga esiqandisini, kufanele kudliwe amahora angama-24, bese kugcinwa esiqandisini kugcinwe izakhiwo zawo izinsuku ezimbili.
Abantu abambalwa abanesifo sikashukela bayazi ukuthi yimaphi amakhambi okwehlisa ushukela wegazi. Kepha akuwona wonke umuntu owazi ukuthi amakhambi amaningi okwelapha ane-contraindication ukuze asetshenziswe. Kungakho uma usebenzisa noma yimuphi amakhambi, ukubonisana ne-endocrinologist ekhona kuyadingeka.
Ngokuzimela uqoqe izinto zokusetshenziswa ukuze ulungiselele imikhiqizo yokwelapha esekelwe kuzo uvunyelwe kuphela kubantu abanolwazi olujulile kule ndawo. Ngaphandle kwalokho, ukusetshenziswa kwemikhiqizo yezokwelapha evela kumakhambi kungaqeda ukungathandeki uma isitshalo esinoshevu sisetshenziswa esikhundleni samakhambi adingekayo. Kubalulekile ukulandela ngokuqinile uhlobo lomuthi udokotela azowunikeza isiguli, kanye nomthamo.
Galega herb izindawo zokwelapha zesifo sikashukela
Galega (ikhemisi lezinkukhu, lat. IGalega officinalis) Ingabe ngesinye sezitshalo zikashukela eziphumelela kakhulu?
EFrance galega (i-french lilac) isetshenziswe amakhulu eminyaka ngabelaphi bendawo, bekuyindlela eyaziwayo yezimpawu zesifo esisibiza ngokuthi isifo sikashukela namuhla, kubandakanya nokuchama ngokweqile. IGalega officinalis "ungumthombo" we-metformin, esinye sezidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu kushukela wohlobo II.
Isazi sesifo sikashukela saseFrance uJean Stern, ngokusekwe kwi-alkaleoid galegin esehlukaniswe ekhemisi lembuzi metformin wambiza I-Glucophagus, okusho ukuthi "odla ushukela." Ngaphezu kokwehlisa ushukela wegazi, i-galega inyusa ukubekezelelwa kwe-glucose, kuyilapho umzimba uphendula ngokushesha kakhulu ekushintsheni kwamazinga kashukela, okuqeda ukuqhuma kwawo kungazelelwe. Kuhle ukusebenzisa i-galega esigabeni sokuqala sesi sifo, uma yenza ushukela wegazi ube ngokwejwayelekile amakhambi nokudla kungasiza.
Ubisi thistle sikashukela
Ubisi thistle (ameva, i-tatarnik yesiliva, i-marin tatarnik, ubisi lwethanga, i-lat. Sílybum marianum) - i-ejenti emangalisayo yokwelapha izifo zesibindi kanye nomlwi osebenzayo wokulwa ukumelana ne-insulin (ama-pancreas aphoqelekile ukukhiqiza i-insulin eningi kunesidingo) kanye ne-hyperglycemia ebangelwa isifo sikashukela.
Izidakamizwa ezitholakala embebeni yobisi lukakhisimusi silymarin kukhombisa ukuqina antioxidant izakhiwo ezivikela ama-pancreas ekucindezelekeni kwe-oxidative, okungadala noma ukukhulisa ushukela. Ngokwemiphumela yocwaningo, kwatholakala ukuthi lezo ziguli ezinesifo sikashukela sohlobo II ezithola ama-200 mg silymarin Kathathu ngosuku kuhlanganiswa nokwelashwa okujwayelekile, kwehla ukwehla okukhulu: ushukela wegazi osheshayo, glycosylated hemoglobini-cholesterol ephelele, i-high density lipoprotein cholesterol kanye triglycerides.
Ngaphezu kwalokhu, Thistle ubisi uyanda amandla wesibindi ukumunca ushukela owengeziwengokuyikhipha ngaphandle kwegazi, esiza ukugwema izimpawu eziningi zikashukela ezinzima, kufaka phakathi ukukhubazeka kwememori, ukuphulukiswa kancane, kanye nengozi yokutheleleka kwezifo nezinkinga zokubuka, kufaka phakathi isifo sikashukela sokulwa nesifo sikashukela. Ngamandla okukhuthaza ukulawulwa kwamazinga we-insulin egazini, ubisi lwethanga lunganciphisa ingozi yokuthola isisindo, okungomunye wemiphumela emibi yamazinga kashukela egazini.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-burdock izimpande
Impande yeBurdock (I-burdock, i-burdock, i-burdock, i-burdock, i-burdock, i-lepelnik, inja, i-lat. I-Arctium) iqukethe i-inulin, i-fiber prebiotic fiber yokudla okuthuthukisa ukugaya, isiza ukwehlisa ukufakwa kweshukela egazini, ngaleyo ndlela yehlise amazinga kashukela, okwenza i-burdock ibe yisinqumo esihle kakhulu kubantu abazama ukulawula ngokwemvelo amazinga abo kashukela ngaphandle kwamakhemikhali.
I-Inulin isebenza kakhulu ekunqandeni intuthuko futhi inciphise ubunzima besifo sikashukela kanye nezinkinga ezihambisana noshukela, ikakhulukazi i-retinopathy yesifo sikashukela. Izithako ezimbili ezisebenzayo ezimpandeni ze-burdock, i-arctin ne-arctigen, ushukela wegazi ophansi ngemuva kwesidlo esine-carbohydrate.
Lesi sitshalo siqukethe ama-antioxidants anamandla anjenge-phenolic acid, i-quercetin ne-luteolin, futhi lokhu kungenye yezimpawu eziphambili ze-antidiabetic ze-burdock. Amazinga we-inulin abalulekile ezimpandeni ze-burdock ukwehlisa okuphelele kwe-cholesterol, ngaleyo ndlela sivikela uhlelo lwethu lwethambo nenhliziyo. Izinto ezinikeza ukunambitheka kwe-burdock ezimpandeni ze-burdock zivuselela ukukhiqizwa kwe-bile, okusiza inqubo yesibindi ukuba nobuthi ngokushesha futhi ibasuse ohlelweni.
Ungayiphatha kanjani i-repeshka
Ukukhishwa kweRepeshka kusebenza ngokukhuthaza ukukhiqizwa kokuthathwa kwe-insulin ne-glucose, ngaleyo ndlela kwehlise izinga le-glucose egazini, futhi kusize ekulweni nesitha esibaluleke kakhulu - ukucindezelwa kwe-oxidative, imbangela yomonakalo omkhulu esibindini, ezinzwa nasemaselini. Ukucindezelwa kwe-Oxidative kudala inqubo yokuvuvukala okuwuphawu lwesifo sikashukela nezinye izifo eziningi, njengokukhuluphala, izifo zesibindi ezinamafutha kanye nomfutho wegazi ophakeme.
Ukusetshenziswa kokukhishwa kotshwala kwe-repeska kuvimbela ukwanda kwesisindo somzimba kanye nokuqongelela kwamafutha esibindini, futhi imiphumela yesikhathi eside ichazwa yi-antioxidant yayo, imisebenzi yokulwa nokuvuvukala nokubuyiselwa kwesibindi.
Umhlonyane wesifo sikashukela
Umhlonyane (upelepele wasendle, umhlonyane, umunyu, utshani bomfelokazi, lat. I-Artemisia) - umuthi obabayo ngokweqile onezakhiwo ze-antidiabetesic futhi unikeza impilo yamathumbu enhle. Ngumunyu owenza umhlonyane uqine kakhulu.
Umhlonyane wehlisa ushukela wegazi, kusebenze amandla omzimba uqobo. Ucwaningo selukhombisile: ukusetshenziswa kwe-70% yotshwala obunobuthi obudakayo kunikeza ukwehla okukhulu kwe-glucose yegazi amahora angama-2-4 ngemuva kokusinwa. Imiphumela yathuthukiswa ngokusetshenziswa ngakunye okulandelayo.
Ukukhipha umhlonyane Isebenza njenge-enzyme eguqula ukudla okudla okuvela ekudleni kanye noshukela olulula kube ushukela ngaphandle kokuqhuma okusheshayo, futhi ukusetshenziswa kwe-insulin kuyadingeka emithanjeni emincane. Umhlonyane awugcini nje ngokunciphisa ushukela wegazi, kodwa futhi uqinisekisa impilo yamathumbu, isibindi kanye nesinye inyongo, ngoba lapho lezi zitho zingasebenzi kahle, le ndlela evulekile yesifo sikashukela nezifo ezihlobene naso.
Ukusetshenziswa komhlonyane kunezinzuzo zoku:
isisindo sokuthola amandla
ngisize ekugayweni kwamafutha,
umunyu womhlonyane wehlisa ukufisa kwethu amaswidi,
kuvimbela ukuthopha, okuvame ukubangelwa ukugaya okungasebenzi kahle.
Fenugreek imbewu yesifo sikashukela
Imbewu yeFenugreek (shambhala, fenugreek, helba, chaman, lat. I-Trigonella foenum-graecum) babe nokuqukethwe okuphezulu kwe-fiber encibilikayo, ebambezela ukugaya nokufaka ushukela egazini, ngaleyo ndlela kusize ukugcina izinga loshukela elizinzile.
Ososayensi baseNdiya bathole ukuthi ukwengeza amagremu ayi-100 e-fenugreek imbewu kafulawa ekudleni kwansuku zonke kweziguli ezinesifo sohlobo I sikashukela kubaluleke kakhulu kwehlisa ushukela igazi elisheshayo, lithuthukisa ukubekezelela ushukela, futhi futhi kunciphisa i-cholesterol ephelele, i-LDL ("embi" cholesterol) ne-triglycerides. Kokunye ukuhlola, ukufakwa kwe-15 g yefenugreek imbewu kafulawa ekudleni okuphuzwa ngabantu abanesifo sikashukela sohlobo II kwaholela ekwehlelweni kweglucose yegazi ngemuva kokudla, ngenkathi isifundo esihlukile sathola ukuthi ngemuva kokuthatha i-2,5 g ye-fenugreek kabili e izinyanga ezintathu, amazinga kashukela wegazi kubantu abanesifo sikashukela sohlobo II esinciphile sehlile kakhulu.
Umthamo onconyiwe ngokuthatha i-fenugreek kuhlukile: kusuka ku-2,5 kuya ku-15 amagremu ngosuku. Udinga ukukhuluma nodokotela wakho ngezinhloso zakho zokuthatha i-fenugreek futhi ucele izincomo ngokuya ngesisindo sakho nezinye izinto.